Zinqunywa amakhanda zishiywe (ziyekwe) – iAfrika
Zinqunywa amakhanda zishiywe (ziyekwe)
Ake sitekule ngesintu sakithi, singasho bona abafazi bakwaNomgaga ababetekula behlez’ emlovini!
Ukuthi “zinqunywa amakhanda zishiywe” kusho ukuthini?
Uma kuthiwa “zinqunywa ‘amakhanda zishiywe”, noma “zinqunywa ‘amakhanda ziyekwe”, lokho kufana nokugeza esingezansi kuphela ushiye ngenhla. Kusho ukuthi wenze into kodwa kwaba khona okushiyile wangayiphetha.
Lesi yisaga esichaza ukukha indaba phezulu bese uyishiya kanjalo ungafuni ukugeqa amagula. Kungaba wukuthi uyibeka umkhusu leyondaba noma uphosela lowo obumxoxela inselelo yokuba azitholele yena udaba oluphelele.
Uma “uzinquma amakhanda uzishiya”, imvamisa indaba uyiveza isihloko nje kuphela ungabe usayiqedela. Lesi yisaga osisebenzisa uma ugwema ukuchaza kabanzi ngento ethile bese uvele uthi “zinqunywa amakhanda zishiy’we”, maqede uphume kanjalo kulowomuntu.
Lesi yisaga esisebenza kakhulu uma kungesilona udaba oluqondene nawe ngqo, kuyizindaba eziqondene nabanye abantu. Kwesinye isikhathi indaba uyiyeka ngoba usuke ugwema ukuthi ungaze uzifake enkingeni kumbe uyigeje indaba leyo ungayisho ngendlela, bese ngalokho uzithola sekumele wenabe ngodaba onolwazi oluncane noma olufingqiwe ngalo.
Lesi yisaga esisuselwa esitshalweni igudu (isihlahla sensangu) elibhenywayo. Sonke siyazi ukuthi uma uvuna insangu awuyivuni njengommbila kepha uqhutha amakhanda noma izinhlamvu zayo maqede uyishiye kanjalo. Insangu ke ngokwesiko lwesiZulu ibhenywa ngamakhehla amadala kuphela esebenzisa igudu ukuzitika ngayo. Lokho amakhehla akwenza lapho eqhuba usuku noma kukhona udaba lawomadoda aludingidayo, okujulwe ngalo, bese ethi lapho exoxa abe ephefuza lona belu igudu lelo.
Tags Izindaba, Zinqunywa amakhanda
Abasiki bebunda Amanga Amansumpe Ibunda Izaga Izindaba Izisho Selidumela emansumpeni Ubisi UHubhu kaBhejane Ukufulela Ukutusa Ulimi Utshani Zinqunywa amakhanda